SADDEX Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Lagula Taliyey Inay La Saxeexdaan Philippe Coutinho - Gool24.Net
SADDEX Kooxood Oo Ingiriis Ah Oo Lagula Taliyey Inay La Saxeexdaan Philippe Coutinho
17/05/2020 Abdiwahab A. Abeye
Saddexda kooxood ee Liverpool, Manchester United iyo Chelsea waxay heli doonaan xoog ka badan intii hore haddii ay midkood u dhaqaaqdo saxeexa laacibka reer Brazil ee Philippe Coutinho oo ay xagaaga keento garoonkeeda, sida uu rumaysan yahay xiddigii hore ee Manchester United ee Owen Hargreaves.
Laacibka reer Brazil ee hadda amaahda ugu maqan Bayern Munich ayaa dib ugu laaban doona Barcelona marka uu xili ciyaareedku dhamaado, waxaase loo badinayaa in aanu Camp Nou ku hakan doonin ee uu koox kale usii dhaafi doono haddii laga soo gudbiyo dalab macquul ah oo qancin kara.
Bayern Munich oo haysatay dookh ah in heshiiska amaahda ah ay u beddeli karto mid rasmi ah ayaa go’aansatay inay iska soo celiso inkasta oo 22 ciyaarood oo uu u saftay uu u dhaliyey siddeed gool, lix kalena caawiye ka noqday.
27 jirkaan oo Barcelona ay January 2018 kusoo iibsatay £142 milyan, waxa la sheegayaa in xagaaga ay kala-badh qiimahaas ku heli karaan kooxaha Premier League, waxaana la tilmaamayaa in £70 milyan uu yahay waxa ay Barca hadda sii ishaarayso in haddii loola yimaaddo ay si degdeg ah u aqbasho.
Hargreaves ayaa rumaysan in kubadda ku jirta Coutinho ay tahay wax ay u baahan yihiin kooxaha waaweyn ee Ingiriisku, gaar ahaa Liverpool, Manchester United iyo Chelsea oo ah kuwa uu kusoo bixi doono.
“Waxaan jecelahay ciyaartiisa, waxaan u jecelahay ciyaartoy ahaan.” Ayuu yidhi Hargreaves, waxaanu intaa ku daray: “Way caddahay inuu waqti adag qaatay intii uu ka tegay Liverpool. Barca ayaan u shaqaynin, Bayer ayaan sidoo kale u shaqaynin, laakiin waxa uu wali haystaa waqti badan, waligayna kuma tirinayo inay u dhmaaatay.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan arko isaga oo kusoo laabtay Premier League. Kooxo badan ayuu kuwo wanaagsan ka dhigi lahaa.”
Laacibkan hore oo magacaabaya kooxaha ugu baahida badan ee ay tahay inuu ku biiro, waxa uu yidhi: “Haddii Liverpool ay wax ka maqan yihiin, waa ciyaartoy booska No.10 ah.
“Waan ogahay in laga yaabo in aanay isaga u baahnayn sababtoo ah saddexda afka hore oo wanaagsan ee dheelitirka ku sameeya khadka dhexe.
“Waxa jira hadal-hayn badan oo ku saabsan Chelsea iyo xataa Manchester United.
“Waxa jira kooxo badan oo haddii aan ahaan lahaa agaasimaha ciyaaraha, hubaashii magaciisu wuuxu ku jiri lahaa liiska ciyaartoyda imanaya, saamayn weynna wuu samayn lahaa.”